एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा मुम्बई इन्डियन्स सर्वाधिक सफल फ्रेन्चाइज टोली हो । १३ संस्करण आइपिएल मध्य पाँच उपाधि मुम्बईको नाममा छ । जुन कुनैपनि फ्रेन्चाइज टोलीले आइपिएलमा जितेको सर्वाधिक उपाधि हो ।
भारतीय क्रिकेट टोलीका ओपनर रोहित शर्माले सन् २०१३ मा मुम्बईलाई पहिलो उपाधि जिताएका थिए । त्यसपछि रोहितको कप्तानीमा मुम्बईले २०१५, २०१७, २०१९ र २०२० मा उपाधि जित्नै सर्वाधिक सफल टोली बनाए । कुनैपनि टोली सफल हुन खेलाडीसँगै कप्तान, प्रशिक्षक र ब्यवस्थापन पनि त्यतिनै उत्कृष्ट हुनुपर्छ ।
अक्सनमा गर्ने खेलाडी अनुबन्धले पछि नतिजामा धेरै प्रभाव पार्छ । अक्सन अघि कुन खेलाडीलाई फुकुवा र अनुबन्ध (रिलिज र रिटेन) गर्छ त्यसले प्रदर्शन र टोली निर्माणमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । पछिल्लो सिजनमा मुम्बईले आफ्नो एक्लौटी दबाब कायम गर्दै उपाधि जितेको थियो । विश्व स्टार खेलाडीले भरिभराउ मुम्बई पछिल्लो सिजनहरुमा अब्बल रहँदै आएको छ ।
टोलीमा गतवर्षका खेलाडीलाईनै निरन्तरता दिएको छ । मुम्बई उपाधिको ह्याट्रिक गर्ने पहिलो टोली बन्ने सोचमा छ । गतवर्ष उपाधि जित्दाका सबै प्रमुख खेलाडी यस सिजनको मुम्बई टोलीमा छन् । मुम्बईले यस सिजनको आइपिएल उपाधि जित्दै ह्याट्रिक गर्न सक्ने ५ बलिया आधार यस प्रकार छन् ।
५. म्याच विनर अलराउन्डर
मुम्बईमा म्याच विनर विश्व चर्चित अलराउन्डर छन् । भारतीय क्रिकेट टोलीका हार्दिक पान्ड्या, क्रुनाल पान्ड्या, वेस्टइन्डिजका काइरन पोलार्ड, न्युजिल्यान्डका जेम्श निसम र अष्ट्रेलिया नाथन कुल्टर नाइल मुम्बईका अलराउन्डर हतियार हुन् । हार्दिक र पोलार्ड हार्ड हिटर हुन् । जसले एकै ओभरमा खेललाई मोड्न सक्छन् । यी दुबै खेलाडी राम्रो लयमा पनि छन् । न्युजिल्यान्डका निसम पनि ठूला सट र इनिङलाई परिचित खेलाडी हुन् ।
क्रुनाल र नाथन कुल्टर नाइल पनि राम्रो ब्याटिङ गर्न सक्छन् । मुम्बईका शीर्ष र मध्यक्रमका प्रमुख ब्याट्सम्यान नचल्दा पनि तल्लोक्रममा हार्दिक, पोलार्ड, निसम, क्रुनालले आक्रामक ब्याटिङका साथ ठूलो इनिङ खेल्न सक्छन् । अर्कोतर्फ प्रमुख बलर नचल्दा पनि राम्रो विकल्पको रुपमा छन् । जसले गर्दा मुम्बईले यस सिजनको उपाधि जित्नै ह्याट्रिक गर्न सक्छ ।
४. उत्कृष्ट तीव्र गतिको बलिङ आक्रामण
तीव्र गतिको बलिङ आक्रामण मुम्बईको पहिचान हो । मुम्बईमा वर्तमान समयका दुई उत्कृष्ट तीव्र गतिका बलर जस्प्रित बुमराह र ट्रेन्ट बोल्ट छन् । बुमराह योर्कर र बोल्ट स्वीङका लागि परिचित खेलाडी हुन् । यी दुबै बलरले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार आफ्नो दबदबा कायम गर्दै आएका छन् ।
पावर प्ले र डेथ ओभरको साथै मध्यक्रममा सबैमा बलिङ गर्ने यी दुई बलरको बलमा कुनैपनि ब्याट्सम्यानलाई रन जोड्न सहज हुँदैन । जसले गर्दा विपक्ष्य टोलीलाई मुम्बई सामू ठूलो योगफल बनाउन कठिन पर्न सक्छ ।
नयाँ बल र डेथ ओभर दुबैमा विकेट लिदै दबाबमा राख्छन् । गत सिजनमा बोल्टले २५ र बुमराहले २७ विकेट लिदै उपाधि सहज बनाएका थिए । यी दुई बलरलाई छाड्ने हो भने मुम्बईमा नाथन कुल्टर नाइल, एडम मिल्ने, धवल कुलकर्णी, अर्जुन तेन्दुलकर, मार्को जानसन लगायतका तीव्र गतिका बलर छन् । हार्दिक, पोलार्ड र निसम राम्रो पार्टटाइम विकल्प हुन् । मुम्बईको तीव्र गतिको बलिङ युनिट बलियो उत्कृष्ट हुँदा उपाधि सहज बन्न सक्छ ।
३. ब्याटिङ लाइनअपमा गहिराई
मुम्बईको ब्याटिङमा गहिराई छ । मुम्बई सिमित ब्याट्सम्यानमा निर्भर छैन । जसले गर्दा शीर्ष र मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान विना दबाब खेल्छन् । मुम्बईको ओपनिङ रोहित शर्मा र क्विन्टन डी ककले गर्ने गर्दछन् । यी दुबै ब्याट्सम्यान ठूला सट इनिङको लागि परिचित छन् । यी दुई सस्तैमा आउट हुँदा ईशान किशन र सूर्य कुमार यादवले मध्यक्रम सम्हाल्ने छन् । सूर्य र किशन सस्तैमा आउट भए पनि त्यसपछि सम्हाल्ने हार्दिक र पोलार्ड छन् ।
यी ६ ब्याट्सम्यान मध्य एक क्रिजमा टिक्दा मुम्बईले विशाल योगफल बनाउन सक्छ । किनकी यी ६ ब्याट्सम्यान आक्रामक र ठूला इनिङका खेल्ने क्षमता भएका खेलाडी हुन् । तल्लोक्रममा क्रुनाल र जेम्श निसमले पनि ठूलो इनिङमा बदल्न सक्छन् । बोल्ट, बुमराह र राहुल चहर बाहेक मुम्बईका अन्य सबै ब्याट्सम्यानले ठूलो इनिङ खेल्न सक्छन् । जसले हरेक ब्याट्सम्यान आफ्नो शैलीको खेल खेल्न पाउछन् ।
कुनै दबाब हुँदैन । एउटा आउट हुँदा अर्कोले सम्हाल्छ । एक दुई खेलाडीको खराब दिन रह्यो भन्दैमा सबैको हुने कुरा पनि हुँदैन । त्यसैले मुम्बईको ब्याटिङ मजबुत छ । मजबुत ब्याटिङले उपाधि सहज बनाउन सक्छ ।
२. बलियो र सन्तुलित टोली
मुम्बईको टोलीमा सन्तुलन छ । ब्याटिङ, बलिङ, फिल्डिङ, कप्तानी, ब्यवस्थापन सबैमा अब्बल छ । धेरै फ्रेन्चाइज टोलीको कसैको ब्याटिङ र केहिको बलिङ बलियो देखिन्छ । तर मुम्बईको टोलीमा ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा उच्च छ । जसले विपक्ष्यले मुम्बईको कमजोरीको फाइदा उठाउन विपक्ष्यलाई कठिन पर्छ । त्यसैले मुम्बईले यो सिजनको आइपिएलको उपाधि जित्न सक्छ ।
१. रोहितको कप्तानी
मुम्बईलाई उत्कृष्ट र सफल बनाउन कप्तान रोहितको ठूलो हात छ । कुनैपनि टोलीमा राम्रो खेलाडी भएर मात्र टोली सफल बन्न सक्दैन । खेलाडीको क्षमतालाई निचेर त्यहि अनुसार भूमिका दिनसक्ने कप्तान पनि हुनुपर्छ । राम्रो कप्तानी गुण भएका खेलाडी हारेको खेल पनि जिताउन सक्छन् । कमजोर कप्तानले लिने निर्णयको कारण जितेको खेल पनि हार्न पुग्छ । चलाख र चतुर दिमाग भएका रोहित हारेको खेल पनि जिताउन सक्ने क्षमता राख्ने कप्तान हुन् । अर्कोतर्फ रोहितले खेलाडीलाई स्वतन्त्र छोड्छन् ।
खराब प्रदर्शन गर्दा पनि उ माथि विश्वास गर्दै थप हौसला प्रदान गर्छन् । कुनै दबाब राख्दैनन् । खेलाडीमाथिको विश्वासनै रोहितको सफलता हो । हार्दिक, सूर्य, किशन, क्रुनाल अहिलको स्तरसम्म आउनुमा रोहितको ठूलो हात छ । रोहितको उत्कृष्ट कप्तानी मुम्बईको ठूलो हतियार हो । रोहितको उत्कृष्ट कप्तानीमा मुम्बईले ह्याट्रिकसँगै छैटौं उपाधि जित्न सक्छ ।